with i- Leaders
criticism (February 2013)
criticism (January 2013)
criticism February 2013
moe thiha aung collection
Posted Apr 15, 2014, 7:13 PM by lin ker
ဘာ လင် မြို့ တော် မှ ဘာ လင် သင်္ကေတ၀က်ဝံရုပ်ပေးအပ် ဘာ လင် မြို့ တော် မှ ဘာ လင် သင်္ကေတ ဝက် ဝံ ရုပ် အား ဒေါ် အောင် ဆန်း စု ကြည် ကို ပေး အပ် ပါ တယ် ။ Photo : Nainglin Aung ဒ ...
Posted Apr 13, 2014, 3:56 PM by lin ker
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဘာလင်တံတုိုင်းကို သွားရောက်လေ့လာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဘာလင်တံတုိုင်းကို သွားရောက်လေ့လာ ဒီဗွီဘီ 13 April 2014 ဂျာမနီနိုင်ငံကိုရောက ...
Posted Apr 13, 2014, 3:52 PM by lin ker
ကျမဘာကြောင့် Burma လို့ သုံးရသလဲ(ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်) Spring Flowers ကျမဘာကြောင့် Burma လို့ သုံးရသလဲဆိုတာကို ဒီနေရာမှာ ရှင်းဖို့လိုလာပါတယ် ။ လူတော်တော်များမ ...
Posted Apr 12, 2014, 9:55 AM by lin ker
Posted Apr 12, 2014, 3:20 AM by lin ker
မိုးကုတ်ခရီးစဉ် (မတ် ၂၀၁၄)
Posted Mar 24, 2014, 3:10 AM by lin ker
Posted Mar 22, 2014, 11:42 AM by lin ker
ချင်းတွင်းကျော်စွာလှိုင်ရဲ့ ပန်းချီလက်ရာ အမေစုရဲ့ မိုးကုတ်ခရီးစဉ်အပြန် မေမြို့မှာ ပေးအပ်ရန်စီစဉ်ထားတဲ့ မုံရွာမြို့က အနုပညာရှင် ချင်းတွင်း ကျော်စွာလှိုင် ရေးဆွဲထားတဲ့ ချည်လက်ပန်းထိုး ပန်းချီ မူရင်း MC Monywa
Posted Mar 22, 2014, 9:34 AM by lin ker
Fortune မဂ္ဂဇင်းရဲ့ ကမ္ဘာ့အကြီးမြတ်ဆုံးခေါင်းဆောင် ၅၀ စာရင်းထဲ ဒေါ်စုပါဝင် ကမ္ဘာ့အကြီးမြတ်ဆုံးခေါင်းဆောင်စာရင်း နံပတ်တစ် စာရင်းဝင် ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးနှင့် နံပတ်ခြောက် စာရင်းဝင် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် တွေ့ဆုံကြစဉ်။ နားဆင်ရန် အမေရိကန်က နံမည်ကျော် စီးပွားရေး မဂ္ဂဇင်း Fortune ရဲ့ ၂၀၁၄ ခုနှစ်အတွက် ကမ္ဘာ့အကြီးမြတ် ဆုံးခေါင်းဆောင် အယောက် ၅၀ စာရင်းကို မနေ့ကထုတ်ပြန် ခဲ့တာမှာ မြန်မာ့ ဒီမိုကရေ စီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လည်း ပါဝင်ပါတယ်။ အများ အကျိုး ဆောင်ရ ...
Posted Mar 21, 2014, 11:00 AM by lin ker
၂ဝ၁၄ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ NLD က နယ်မြေအားလုံးမှာ ဝင်ပြိုင်မယ် ဧရာဝတီ Friday, March 21, 2014 လစ်လပ် မဲဆန္ဒနယ်များအတွက် အခု ၂ဝ၁၄ ခုနှစ်အတွင်းမှာ ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပဖို့ရှိတယ် လို့ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဌ ဦးတင်အေးက ပြည်သူ့ လွှတ်တော်မှာ မတ်လ ၂ဝ ရက် နေ့ က ပြောသွားပါတယ်။ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပဖို့ အခုလို စီစဉ်ရတာလည်း ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေ ပြင်ဆင်တဲ့အခါ ပါဝင်ရမယ့် ကိုယ်စားလှယ် အရေအတွက် မပြည့်တဲ့အတွက် စီစဉ်ရတာဖြစ်တယ်လို့ ပြည်သ ...
Posted Mar 21, 2014, 10:56 AM by lin ker
31 January 2013(ဂုဏ်ထူးဆောင် ဂွမ်ဂျုးမြို့တော်သူဆု) DVB TV NewsThursday 31 January 2013 01:13ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ဇန်န၀ါရီ ၃၁ ရက်နေ့မှာ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ ဂွမ်ဂျုးမြို့ကိုေ၇ာက်ရှိလာပြီး ဒီမိုကရေစီအရေး လှုပ်ရှားမှုမှာ ကျဆုံးသွားသူတွေကို အမှတ်တရ တည်ဆောက်ထားတဲ့ သူရဲကောင်း ဗိမာန်မှာ သွားရောက် ဂုဏ်ပြုခဲ့ပါတယ်။ အဲဒိ့နောက် ၂၀၀၄ ခုနှစ်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ချီးမျြင့်ခဲ့တဲ့ ဂွမ်ဂျုး လူ့အခွင့်အရေးဆုကို လက်ခံရယူခဲ့သလို ဂွမ်ဂျုး မြ ...
Posted Feb 3, 2013, 8:06 AM by lin ker
31 January 2013(ကိုးရီးယားမီဒီယာများပေါ်မှာ စိုးမိုးထားသော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ပုံရိပ်များ ) ကိုးရီးယားမီဒီယာများပေါ်မှာ စိုးမိုးထားသော မြန်မာ့ဒီမို ကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ပုံရိပ်များ (31-1-2013)ဓါတ်ပုံ ကိုဘန်နီခွန် ဒီးယမ်မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တွေ့ဆုံညစာစားပွဲသို့ တက်ရောက်လာသော ကမ္ဘာကျော်ကိုးရီးယားမင်းသမီးချော လီယောင်အေး ခေါ် ချန်ဂင် အားယနေ့ည တွေ့ရစဉ် (31-1-2013)ခွန် ဒီးယမ် အနုပညာသည်များနှင့် တွေ့ဆုံဖို့ ညစာစားပွဲ တက်ရောက်လာတ ...
Posted Feb 3, 2013, 6:28 PM by lin ker
30 January 2013(ဖျောင်ချန်း အထူးအိုလံပစ်ပွဲတော်တွင်) ခွန် ဒီးယမ် အားကစားသမားများကို အားပေးနှုတ်ဆက်နေတဲ့ မေစု (30-1-2013) ခွန် ဒီးယမ် အပြေးပြိုင်ပွဲမှာ အနိုင်ရရှိသွားတဲ့ ညဏ်ရည်စံလွဲနေရှာသူလေးတစ်ယောက်နဲ့အတူ ပျော်ရွှင်စွာတွေ့ရသော မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (30-1-2013) ဖျောင်ချန်း အထူးအိုလန်ပစ်ပွဲတော်တွင် မသန်စွမ်းအားကစားသမားများကို လိုက်လံနှုတ်ဆက်အားပေးနေစဉ် တွေ့ရတဲ့ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (30-1-2013 ...
Posted Feb 3, 2013, 8:11 AM by lin ker
31 January 2013(ကိုးရီးယား သူရဲကောင်းဗိမာန်မှာ) Published on Jan 31, 2013 တောင်ကိုရီးယား နိုင်ငံကို ရောက်နေတဲ့ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဟာ ၂၀၁၃ ဇန်နဝါရီလ (၃၁)ရက် ဒီကနေ့ "ဂွမ်ဂျူး လူ့အခွင့်အရေးဆု" ကို လက်ခံရယူခဲ့ပါတယ်။ အပြည့်အစုံကို RFA ဝိုင်းတော်သား ဦးဘအောင်က တင်ပြထားပါတယ်။ ကိုးရီးယား သူရဲကောင်းဗိမာန်မှာ တွေ့ရတဲ့ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (31-1-2013) Tun Wai 5.18အထိမ်းအမှတ်အာဇာနည ...
Posted Feb 3, 2013, 7:54 AM by lin ker
29 January 2013(DASSK SPEECH @ Pyeongchang Special Olympics opening ceremony 2013 평창동계스페셜올림픽 개막식 김연아 - Yuna Kim 스페셜스피치) Tun Wai မေမေစုကို..ကိုရီးယာပြည်သူတွေအရမ်းကို တလေးတစား ရိုသေကြတယ်အားပေးကြတယ်ကိုရီင်္းယားမှာရှိနေတဲ့ မြန်မာတွေလဲပါတယ် ။ ဖျောင်ချန်းမှဓါတ်ပုံများဖြစ်ပါတယ်။29.1.2013 ဓါတ်ပုံ Bun Ny
Posted Feb 3, 2013, 8:17 AM by lin ker
Showing posts 1 -5of 71. View more »
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ နှစ်သစ်ကူးနုတ်ခွန်းဆက်စကား(ဒီလှိုင်းစာစောင်) ‎"ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက် ည ၁၂ နာရီ ၁မိနစ်တွင် MRTV မှထုတ်လွှင့်ခဲ့သော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ နှစ်သစ်ဆ ...
Posted Jan 1, 2013, 7:32 AM by lin ker
31 december 2012( ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကော့မှူးမြို့နယ်ကို သွားရောက်) ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်တာပါ - ဇေကမ္ဘာဦးခင်ရွှေအေးနိုင်ရန်ကုန်တ ...
Posted Dec 31, 2012, 7:55 AM by lin ker
30 december 2012(ဒီလှိုင်းရုံခန်းသစ်ဖွဲ့ပွဲ) ခွန် ဒီးယမ် "နောက်ဆိုလို့ရှိ ရင်ကျွန်မတို့က ဒီလှိုင်းကိုတစ်ဆင့်မြှင့်ပြီးတော့ သတင်းစာတစ်ခုလို ထ ...
Posted Dec 30, 2012, 8:14 AM by lin ker
27 december 2012 ( ပညာရေးကွန်ယက် ၂ နှစ်ပြည့်ဈေးရောင်းပွဲတော်) Zaw Mintun Zawmintunဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၊ ဦးတင်ဦး၊ ဦးအောင်မင်း၊ ဦးလှမြင့် တို့ကို အမျိုးသားဒီမိုရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ပည ...
Posted Dec 30, 2012, 6:39 AM by lin ker
27 december 2012(စနစ်ကြောင့်ဆင်းရဲခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြောကြား) The Myanma Age ရန်ကုန် ၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၇။ ယနေ့ နေ့လည်တစ်နာရီအချိန်တွင် ပြည်သူ့ရင်ပြင်၌ပြုလုပ်သော အမျိုးသ ...
Posted Dec 31, 2012, 8:23 PM by lin ker
29 november 2012( ၀မ်ဘောင်တာဝန်ရှိသူများနှင့်တွေ့ ဆုံ) http://www.facebook.com/photo.php?fbid=395923037150210&set=a.395922827150231.90265.100001975513575&type=1&theater
Posted Dec 1, 2012, 4:03 PM by lin ker
30 november 2012(လက်ပံတောင်းခရီးစဉ်) ယနေ့နံနက်ပိုင်း ဟောပြောပွဲမှာ (30-11-2012)Aung Myo Myintဘာလို့ ကွမ်းတွေစားထားကြတာလဲ ... ကွမ်းစားတာ ရုပ်ဆိုးတယ် ။ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ သွားတွေ ကြိုးကုန်မယ် ။ ကွမ်း မစားကြနဲ့ ... — at မုံရွာ၊ လက်ပံတောင်းတောင် လူထုမိန့်ခွန်း -မှhttp://www.facebook.com/photo.php?fbid=10200099373674004&set=a.10200099367633853.192886.1439952558&type=1&theaterယနေ့နံနက် မိန့်ခွန်းပြောကြားပြီး လက်ပံတောင်း ပြည်သူများကို အားပေးနှုတ်ဆက် (30-11-2012). ခွန် ဒီးယမ် Thursday အစိုးရ တစ်ရပ်အနေ ...
Posted Dec 1, 2012, 4:22 PM by lin ker
29 november 2012(လက်ပံတောင်းခရီး) ခွန် ဒီးယမ် Thursday မုံရွာမြို့မှာ တွေ့ရတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကားတန်း... ပြည်သူ သောင်းနဲ့ချီ လမ်းပြည့်ကြပ်အောင် ကြိုဆိုကြလမ်းတစ်လျှောက် သောင်းသောင်းဖြဖြ ပြည်သူများ ကြိုဆိုကြ photo-ဝင်းယဉ်စစ်ကိုင်းနားရောက်နေပြီ။ photo-ချမ်းအေးလူငယ်ဝမ်ပေါင်ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းများအားရင်းနှီးစွာနှုတ်ဆက်
Posted Dec 1, 2012, 7:29 AM by lin ker
26 november 2012( Shadow Minister for International Development (UK),Director of Burma Campaign Ukအဖွဲ့ တို့ နှင့်တွေ့ ဆုံ) ခွန် ဒီးယမ်Wednesday Shadow Minister for International Development (UK)မှ Mr. Ivan Lewis အဖွဲ့နဲ့အတူ နေပြည်တော်နေအိမ်မှာ နိုဝင်ဘာလ ၂၆ရက်နေ့၌ တွေ့ရတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်Shadow Minister for International Development (UK)မှ Mr. Ivan Lewisခွန် ဒီးယမ်Wednesday Mr. Mark Farmaner ( Director of Burma Campaign Uk)နှင့် Mrs. Anna Robert (Executive director UK) တို့နဲ့အတူ နေပြည်တော်နေအိမ်၌ု
Posted Dec 1, 2012, 5:45 AM by lin ker
28 november 2012( နေပြည်တော်မှ ရန်ကုန်သိုFMIလေကြောင်းဖြင့်ပြန်လည်ထွက်ခွာ)) Daw Aung San Suu Kyi with her pet dog in Nay Pyi Daw City (28-11-2012) photo- Sinpauခွန် ဒီးယမ်Wednesday နေပြည်တော်မှ ရန်ကုန်သို FMI လေကြောင်းဖြင့် ယနေ့ ညနေ ၅း၂၀ နာရီ၌ ပြန်လည်ထွက်ခွါ.. (28-11-2012)
Posted Dec 1, 2012, 5:39 AM by lin ker
26october2012(မော်ရော့ကိုနိုင်ငံကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ လာရောက်တွေ့ ဆုံ) ခွန် ဒီးယမ်မော်ရော့ကို နိုင်ငံ Authenticity and Modernity party (PAM) ပါတီ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး Mustafa Corey၊ မော်ရော့ကို လွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ Khadija Rouissi နှင့် မော်ရော့ကို လွှတ်တော်အမတ် နိုင်ငံခြားရေးရာကော်မတီဝင် Mehdi Bensaid တို့ 26-10-2012 နေ့တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အား နေပြည်တော်ရှိ နှင်းဆီစံအိမ်၌ လာရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ကြစဉ် ပုံရိပ်များ။ လက်ရှိကာလ၌ မော်ရော့ကိုနိုင်ငံတွင် လဲ နိုင် ငံရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ စတင်ပြု လုပ်နေသောကြောင ...
Posted Oct 30, 2012, 4:59 AM by lin ker
29 october 2012(ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရန်ကုန်လေဆိပ်မှ နေပြည်တော်သို့ ပြန်လည်ထွက်ခွါ) ခွန် ဒီးယမ်ဒီချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရန်ကုန်လေဆိပ်မှ နေပြည်တော်သို့ FMI လေယာဉ်ဖြင့် ညနေ ၃း၄၅ နာရီတွင် ပြန်လည်ထွက်ခွါသွား... နေပြည်တော်လေဆိပ်သို့ ချောချောမောမော ရောက်ရှိ။ ဒီချုပ် အမတ်အချို့ လေဆိပ်၌ လာရောက်ကြိုဆို... ဓာတ်ပုံ- Bunnyhttp://www.facebook.com/photo.php?fbid=404534722948309&set=a.113611365373981.12303.100001753555387&type=1&theater
Posted Oct 29, 2012, 5:09 PM by lin ker
28 october 2012(ရွှေစင်စင်္ကြာအလှူ) ၂၃.၁ဝ.၂ဝ၁၂ နေ့တွင် ကျရောက်မည် ဖြစ်သော ရွှေစင်စင်္ကြာ ခရီးသွားပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်း၏ မွေးနေ့ အခါသမယတွင် ထူးခြားသော လှူဒါန်းမှုတစ်ခုကို ပြုနိုင်ရန်အတွက် နိုင်ငံရပ်ခြားတွင် ရောက်ရှိ နေသော နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)၏ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးကျော်သူအား ဆက်သွယ်လာ ပါတော့သည်။ လှူဒါန်းမည့်ပစ္စည်းများအဖြစ် (၄၅) ယောက်စီး ခရီးသည်တင် အဝေးပြေး Express ကားကြီးတစ်စီးနှင့် ကော့မှူးမြို့နယ်မှ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသော မိသားစုများ၏ ရေရှည်အကျိုးအတွက ...
Posted Oct 29, 2012, 8:01 PM by lin ker
28 october 2012(ဆရာမောင်ဝံသအား ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည် သွားရောက်တွေ့ဆုံ) ခွန် ဒီးယမ်ဆရာမောင်ဝံသအား ဒေါ်အောင် ဆန်း စုကြည် လာရောက်တွေ့ဆုံ ယနေ့ ၂၈.၁၀.၂၀၁၂ စနေနေ့ ၉း၄၅ တွင် သတင်းစာဆရာ ပြည်သူ့ခေတ်ဂျာ နယ် အတိုင်ပင်ခံ အယ်ဒီတာ ဆရာမောင်ဝံသ အိမ်သို့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေမေးရန် လာရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ကြောင်းသိရသည်..။ Creit & Photo-စောပြည့်ခွန် ဒီးယမ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဆရာမောင်ဝံသ ကျန်းမာရေးအခြေအနေမေးရန် ယနေ့နံနက် သွားရောက်တွေ့ဆုံစဉ်ဒီမို ဖက်တီးဒေါ်အောင ...
Posted Oct 28, 2012, 3:56 PM by lin ker
25 october 2012( နေပြည်တော် ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ရုံးချုပ်သို့သွားရောက်) ခွန် ဒီးယမ်ကြာသာပတေးနေ့တုန်းက နေပြည်တော် ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ရုံးချုပ်သို့ ရောက်ရှိခဲ့တဲ့ မေစု (25-10-2012)
Posted Oct 27, 2012, 7:25 AM by lin ker
28 september 2012(ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမြို့၌ ဗားကလက် ဟာဗဲဆု လက်ခံရယူပွဲ မိန့်ခွန်း) Published on Oct 2, 2012 by ဒီမို သတင်းစဉ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၂၀၁၂ စက်တင်ဘာ ၂၈ရက် ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမြို့၌ ဗားကလက် ဟာဗဲဆု လက်ခံရယူပွဲ မိန့်ခွန်း
Posted Oct 2, 2012, 2:30 PM by lin ker
30 september 2012(အမေရိကန်မှ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နေ့အဖြစ် သတ်မှတ်) လတိုင်း၊ လတိုင်း၏ စက်တင်ဘာလ ၂၅ ရက်နေ့ကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နေ့အဖြစ် အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ အင်ဒီယားနားပြည်နယ်၊ Fort Wayne မြို့တော်ဝန် Tom Henry ကသတ်မှတ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ “ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အမေရိကန်ကိုရောက်နေတုန်း ဖို့ဝေးမြို့မှာ မိန့်ခွန်းပြောခဲ့ပြီးတော့ စက်တင်ဘာ ၂၅ ရက်နေ့ကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစု ကြည်နေ့သတ်မှတ်ဖို့ မြို့တော်ဝန်က ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်တယ် လို့ ကြေညာချက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ မြန်မာတွေအတွက်တော့ ဂုဏ်ယ ...
Posted Oct 1, 2012, 4:18 PM by lin ker
30 september(Aung San Suu Kyi - The Choice (2012) bbc) Published on Sep 30, 2012 by lianlilianli02 from BBC This World 2012Story of Aung San Suu Kyi..copyright owned by BBC
Posted Sep 30, 2012, 12:19 PM by lin ker
29 september 2012(ဆန်ဖရန်စ္စကို) ရွှေသော့ကြီး ပေးအပ်ခဲ့တဲ့ ဆန်ဖရန်စ္စကို မြို့တော်ဝန်ကြီး (29-9-2012) Credit: ခွန် ဒီးယမ်ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်လ်ဆုရှင် လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် မြန်မာတိုင်းရင်းသားမိသားစုများ တွေ့ဆုံပွဲ (ဆန်ဖရန်စစ္စကို ဘေးဧရိယာ စက်တင်ဘာ ၂၉ရက် ၂၀၁၂) Photo Credit and Thanks: U Victor TanHarvard မှ မြန်မာကျောင်းသူလေးများနှင့် အတူ ဓါတ်ပုံရိုက်စဉ် ဓါတ်ပုံ - ကြည်ဇာသန့်ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်လ်ဆုရှင် လူထုခေါင်းဆေ ...
Posted Oct 1, 2012, 5:10 PM by lin ker
20 september 2012(Amnesty's Rights Generation: Aung San Suu Kyi Inspires the Next ) Published on Sep 20, 2012 FULL video from Amnesty's Rights Generation: Aung San Suu Kyi Inspires the Next event at the Newseum in Washington, DC on September 20, 2012. Daw Suu spoke with moderator Alex Wagner of MSNBC's Now with Alex Wagner about her own story asaformer prisoner of conscience, and answered questions from young activists about the human rights issues of tomorrow.
Posted Sep 28, 2012, 5:06 PM by lin ker
30 september(Aung San Suu Kyi - The Choice (2012) bbc)
29 september 2012(ဆန်ဖရန်စ္စကို)
ဆန်ဖရန် Freedom Forum မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မိန့်ခွန်းပြော
ဆန်ဖရန်စစ္စကို မြန်မာတိုင်းရင်းသားများနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တွေ့ဆုံ (ဓာတ်ပုံ)
LA မြန်မာလူထုနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မြန်မာပြည် မပြန်မီ တွေ့ဆုံပွဲ အောက်တိုဘာ (၂)
NLD ကိုလူထုကအမြင်ကတ်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်သွားအောင်ဘယ်တော့မှမလုပ်ကြပါနဲ့ ။
ကမ္ဘာကျော် ရုရှား စစ်တုရင်ချန်ပီယံဟောင်းGarry Kasparov မှ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် အတွက် ပေးပို့သော ရုပ်သံ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို သမ္မတအဖြစ် လက်ခံနိုင်ကြောင်း ဦးသိန်းစိန် ထုတ်ဖော်ပြောဆို
Yale တက္ကသိုလ်တွင်ပြောကြားသည့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မိန့် ခွန်း
Yale တက္ကသိုလ်တွင်ပြောကြားသည့်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မိန့် ခွန်း(နိဂုံး)
မိမိသည် ပြယုဂ်တစ်ခု မဟုတ်ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြောကြား
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ယေးလ်နဲ့ ဟားဗတ်မှာ မိန့်ခွန်းပြော
တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး လိုအပ်ကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောကြား
ကချင်အဖွဲ့ ၂၃ ဖွဲ့မှ ဒုက္ခသည်များအရေး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ထံ အိတ်ဖွင့်ပေးစာပို
Posted Oct 2, 2012, 2:02 PM by lin ker
27 september 2012(At Yale University.)
Aung San Su Kyi:" I haveapersonal regrets"
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား မိုင်ဂျာယန်သို့ လာရောက်ရန် ကချင်အဖွဲ့အစည်းများ ဖိတ်ခေါ်
ငယ်ရွယ်သူများကို NLD ပါတီတွင် ခေါင်းဆောင်စေချင်ကြောင်း ဦးဝင်းတင် ပြော
NLD လမ်းစဉ် ပြင်-ဝင် မှ ဝင်-ပြင် သို့ (အင်တာဗျူး)
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပါဝင်သော ကုလသမဂ္ဂ ပညာရေးဆွေးနွေးပွဲ (ဗွီဒီယို)
ပညာရေးအကြောင်း ကုလမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဆွေးနွေးမည်
ကုလ ပညာရေးဆွေးနွေးပွဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တက်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ကုလသမဂ္ဂ မြန်မာဝန်ထမ်းများ
ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်အဆင့်ဝင် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် – အပိုင်း(၂)
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရဲ့ ပုဝါ နှစ်ဘက် ကို ဘေးတိုက်ဆွဲနေသော တနင်္လာနံ
Posted Oct 2, 2012, 1:59 PM by lin ker
21 august 2012(အခြေခံ ဥပဒေအရ တပ်မတော် အလိုရှိသလောက်ပဲ လွှတ်တော် သက်တမ်းရှိမှာလို့ ဒေါ်စုပြော) Myanmar Online NewsLiked · 21 August Tuesday, August 21, 2012အခြေခံဥပဒေအရတပ်မတော်အလိုရှိသလောက်ပဲလွှတ်တော်သက်တမ်းရှိမှာလို့ ဒေါ်စုပြော - အခြေခံဥပဒေအရ တပ်မတော်အလိုရှိသလောက်ပဲ လွှတ်တော်သက်တမ်းရှိမှာဖြစ်တဲ့အတွက် တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်များနဲ့ အဖွဲ့ချုပ်ကိုယ်စားလှယ်တွေ တတ်နိုင်သမျှ ရင်းနှီးခင်မင်စွာပေါင်းသင်းကြဖို့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က သြဂုတ်လ(၁၉)ရက်နေ့ ညနေပိုင်းက တိုင ...
Posted Sep 16, 2012, 7:58 AM by lin ker
28 august 2012( ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် မြန်မာမိသားစုများ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲဖိတ်စာ) Min Kyaw Khineငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်(လ်) ဆုရှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် မြန်မာမိသားစုများ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု နယူးယောက် အချိန်၊ ၊ စက်တင်ဘာလ ၂၂ ရက် (စနေနေ့) ၂ဝ၁၂ ခုနှစ် နံနက် ၁ဝ နာရီ ၃ဝ မိနစ်မှ နေ့လည် ၁၂ နာရီအထိ နေရာ၊ ၊ "Colden Center for the Performing Arts" Queens College 65-30 Kissena Blvd, Flushing, New York 11367
Posted Aug 28, 2012, 5:34 PM by lin ker
27 august 2012(ခုံရုံးကိစ္စ အငြင်းအခုံကို စိတ်ပျက်စရာ မလိုဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဆွေးနွေး ) Written by The Voice ရန်ကုန်၊ ဩဂုတ် ၂၇ မြန်မာနိုင်ငံ သမ္မတနှင့် လွှတ်တော် တို့ကြား ယခုရက်ပိုင်း တွင်ဖြစ်ပေါ်နေသည် အခြေခံ ဥပဒေ ခုံရုံး ဆုံးဖြတ်ချက် အငြင်းအခုံနှင့် ပက်သက် ၍ သဘောထားကြီးကြီးနဲ့ အမြော်အမြင် ရှိရှိဖြင့် ဖြေရှင်းရန် လိုအပ်ပြီး စိတ်ပျက်စရာ မလိုကြောင်း အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်တွင် ပြောကြားသည်။ "ကျွန်မတို့ အနေနဲ့လည်း စိတ်ပျက်စရာ မရှိပါဘူး။ ကြေ ...
Posted Aug 28, 2012, 5:19 PM by lin ker
27 august 2012(အခြေခံဥပဒေခုံရုံးနှင့်ပတ်သက်၍ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဆွေးနွေးချက်) "အခုဦးမြင့်စိုးအဆိုကိုတရားဥပဒေရှုထောင့်က ကြည့်နိုင် သလို နိုင်ငံရေးရှုထောင့်ကလည်း ကြည့်နိုင်ပါ တယ်။ တရားဥဒေရှုထောင့်ကနေအများအပြားဆွေးနွေး သွားပြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကိုတော့ထပ်ပြီး မဆွေးနွေးတော့ ပါဘူး။ နိုင်ငံရေးရှုထောင့်ကနေ ပဲ ဆွေးနွေး ပါ ရစေ။ နိုင်ငံရေး ရှုထောင့်ကနေ ကြည့်မယ် ဆိုရင် ဒီမိုကရေစီကို ကျင့်သုံး တဲ့ နိုင်ငံတွေမှာ အုပ်ချုပ်ရေး မဏ္ဍိုင်၊ ဥပဒေပြုမဏ္ဍိုင်၊ တရားစီ ရင်ရေးမဏ္ဍိုင်တို့အကြား ချိန်ခွင်လျှာညီမျှရေး အတွက ...
Posted Aug 27, 2012, 3:33 PM by lin ker
24 august (NLDဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီ အစည်းအဝေးကျင်းပ) Eleven Media Group အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီအစည်းအဝေးအား သြဂုတ်လ ၂၄ ရက် မွန်းလွဲ ၃ နာရီက ရွှေဂုံတိုင်ရှိ အဖွဲ့ချုပ်ရုံးချုပ်တွင် ကျင်းပခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါသည်။ အဆိုပါအစည်းဝေးသို့ အဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါအ၀င် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီဝင်(၈)ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပြီး နှစ်နာရီခန့်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်ဟု သိရသည်။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှလွှတ်တော်က ...
Posted Aug 26, 2012, 9:19 AM by lin ker
31 july 2012(တက္ကသိုလ်ပညာရေးဥပဒေမူကြမ်း ပြန်လည်ရေးဆွဲရန် အတည်ပြု) RFA Burmeseတက္ကသိုလ်ပညာရေးဥပဒေမူကြမ်း ပြန်လည်ရေးဆွဲရန် အတည်ပြု 2012-07-31 မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အဆင့်မြင့် ပညာရေးစနစ်ကို နိုင်ငံတကာနဲ့ အညီပြဋ္ဌာန်းနိုင်ရေး အတွက် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကို ပညာရေးမြှင့်တင်မှုကော်မတီ က လက်ရှိတင်ပြထားတဲ့ ၂၀၁၂ တက္ကသိုလ် ပညာရေး ဥပဒေမူကြမ်းကို အသစ်ပြန်လည် ရေးဆွဲပြီး လွှတ်တော်မှာ ထပ်မံဆွေးနွေးတင်ပြဖို့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီ တက္ကသိုလ ...
Posted Jul 31, 2012, 6:07 PM by lin ker
31 july 2012(ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီက ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို သွားရောက်တွေ့ဆုံ နှုတ်ဆက်) Yangon Media Group ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီက ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို သွားရောက်တွေ့ဆုံ နှုတ်ဆက် ======================================== ဝေမာသိမ့် ======================================== ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီက အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည်ကို သွားရောက်တွေ့ဆုံ နှုတ်ဆက်ကာ မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ ရိုက်ကူးခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ ...
Posted Jul 31, 2012, 5:55 PM by lin ker
30 july 2012(ရဟန်းအမဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်) Published on Jul 30, 2012 by BurmaVJMedia အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ရဟန်းအမ ခံယူပွဲကို ပုဂံမြို့ သရပါတံခါးအနီးမှာ ရှိတဲ့ ၀ါးတောကျောင်းတိုက်မှာ ဇူလိုင်လ ၂၉ ရက်နေ့က ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ ရဟန်းခံပွဲ ဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ငွေကျပ် ၁၀ သိန်း မတည်ကာ မန္တလေးတိုင်း မဟာအောင်မြေမြို့နယ် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးအုန်းကြိုင်န ...
Posted Jul 30, 2012, 9:24 PM by lin ker
28 july 2012(အလုပ်လက်မဲ့အခြေအနေ ဆိုးရွားနေကြောင်း တောင်သူတွေက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုတင်ပြ) RFA BurmeseLiked · 20 minutes ago အလုပ်လက်မဲ့အခြေအနေ ဆိုးရွားနေကြောင်း တောင်သူတွေကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုတင်ပြနေပြည်တော် ဥတ္တရသီရိမြို့နယ် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ရုံးကို ဒီကနေ့ သွားရောက်ခဲ့တဲ့ NLD ဥက္ကဋ္ဌ ကော့မှုးမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဒေသခံ တောင်သူလယ်သမားတွေက မိမိတို့လယ်ယာမြေတွေ အသိမ်းခံခဲ့ရတာကြောင့် လယ်မဲ့ယာမဲ့အပြင် အလုပ်လက်မဲ့တွေအဖြစ် ဘ၀အခြေအ ...
Posted Jul 28, 2012, 7:33 AM by lin ker
28 july 2012(ဥတ္တရသီရိ မြို့နယ် ဒေသခံများ အား ပထမဆုံး အကြိမ်လာရောက်တွေ့ဆုံ") "ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဥတ္တရသီရိ မြို့နယ် ဒေသခံများ အား ပထမဆုံး အကြိမ်လာရောက်တွေ့ဆုံ"(နေပြည်တော်၊ ဇူလိုင်၊၂၈ ) ယနေ့ နံနက် ၁၀း၀၀ အချိန် နေပြည်တော် ကောင်စီနယ်မြေ ဥတ္တရသီရိ မြို့နယ် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ဥတ္တရသီရိ မြို့နယ်ရုံးခွဲ သို့ အဖွဲ့ချုပ် ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လာရောက်၍ ဒေသခံပြည်သူများ နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ အဆိုပါတွေဆုံ ပွဲသို့ ရောက်ရှိ လာသူ ဒေသခံများ အား ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က ဒေသတွင်း အခက်အခဲများ မေးမြန ...
Posted Jul 28, 2012, 7:20 AM by lin ker
Showing posts 1 -5of 61. View more »
Posted Apr 18, 2014, 11:03 AM by lin ker
Posted Jan 21, 2013, 5:02 AM by lin ker
" မြ တောင် ကျောက် စာ " Tun Wai's photo.‎" မြ တောင် ကျောက် စာ " အကကောင်း အတွန်ကောင်း မြန်မာတို့ရဲ့ ဒေါင်းကို စိန်ပြောင်း အမြေ ...
Posted Jan 17, 2013, 7:58 PM by lin ker
Aung San Suu Kyi - Hans Fredrik Jacobsen (Ragnar Bjerkreim)
Posted Sep 17, 2012, 7:25 PM by lin ker
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဘိုင်အိုဂရာဖီ စာအုပ် ကို သုံးသပ်ထားခြင်း၊ Book Review on 'The Lady and the Peacock' by Joshua Kurlantzick by Aye Aye Soe Win on Wednesday, 12 September 2012 at 18:21 ·Copied from Democracy: A Journal of IdeasBook Review The first serious biography of Aung San Suu ...
Posted Dec 25, 2012, 2:38 PM by lin ker
Awards Received by Daw Aung San Suu Kyi Awards Received by Daw Aung San Suu Kyi The Daughter of the Father of Burma (Myanmar) Latest in the Series: Global Citizen Award, Atlantic Council, New York 2012 The Winner ...
Posted Aug 27, 2012, 2:19 PM by lin ker
Showing posts 1 -2of 4. View more »
အမျိုးသားရေးရှုဒေါင့်မှ ရွေးချယ်ရမည့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ==================================ဒီစာကိုမရေးခင် ကျနော်ဟာ ဒေါ်စုကို ဝေဖန်ဘူးသူတစ်ယောက်ဖြစ်ကြောင်း သတိပြုစေလိုပါတယ်။ ပြီးတော့ ဘင်္ဂလီအရေးကို အစောဆုံး ဆန့်ကျင်ခဲ့သူတွေထဲပါပါတယ်။ (Facebook Timeline ကြီးက အကောင်းဆုံးသက်သေပါပဲ။ 2011 ၀န်းကျင်က ကျနော့် Post တွေ ဖတ်ကြည့်ပါလို့သာ ပြောပါရစေ)ဒီစကားကို အရင်ကြိုပြောရတာက ကျနော်ဟာ တစ်ဘက်တည်းကို လိုက်တတ်သူ မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပါ။မြန်မာပြည်ဖွား မြန်မာစစ်စစ်တစ်ယောက်မို့ ကျနော် အမျိုးချစ ...
Posted May 14, 2014, 6:06 PM by lin ker
“Invictus အနိုင်မခံ” Spring Flowersမိုက်ကယ်အဲရစ် ဆုံးတော့ ရက်လည်ကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ခြံထဲမှာ လုပ်တယ် ။ ဆုံးတဲ့နေရာကတော့ ( အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း ) လန်ဒန်မှာပေါ့ ။ မဆုံးခင်လေးထိ သူ့အမျိုးသမီးဆီကို နောက်ဆုံးအကြိမ်လာတွေ့ဖို့ မြန်မာပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာလျှောက်တဲ့ အကြိမ်ပေါင်းမြောက်များစွာဟာ အချည်းနှီးဘဲ ။ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားတဲ့အနေနဲ့ လာခွင့်ပြုလိုက်ဖို့ စစ်အစိုးရကို တိုက်တွန်းကြတဲ့အထဲမှာ ပုပ ...
Posted Apr 18, 2014, 10:42 AM by lin ker
"""၅၉(စ)(ဃ) တွေ ပြင်လဲ ဒေါ်စုဘဲ သမ္မတဖြစ်မယ်၊ အာဏာရှင်ကတော့ ရှိနေဦးမှာပဲ""" Cho Tu Zal 12 april 2014ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရဲ့ နိုင်ငံရေးဗျူဟာ မှာ အဓိက အားနည်းချက်က ရွေးကောက ...
Posted Apr 12, 2014, 3:35 AM by lin ker
"""ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ချန်မယ့် အမွေဆိုး""" Cho Tu Zal 10 April တကူးတက ကို ဒေါ်စု ကို ဝေဖန်တိုင်း ဆတ်ဆတ်ခါ မဆင်မခြင်တွေ ဖြစ်တတ်တယ် လို့ စကားလည်း ခံ ခဲ့သလ ...
Posted Apr 12, 2014, 3:32 AM by lin ker
***ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဘယ်လဲ ဘာလဲ???*** ရှေးဦးစွာ ကျွန်တော် မေတ္တာရပ်ခံထားပါရစေ ။ ယခုတင်ပြတဲ့ဆောင်းပါးဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ် ဝေဖန်တိုက်ခိုက်တဲ့အရေးအသား အတွေးအခေါ်မျိုး မဟုတ်ဘဲ နိုင်ငံရေးသမားတဦးအနေနဲ့ခံစားရတာကို ရေးသား တင်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ် ဆိုတာ နားလည်ပေးဖို့ လိုပါတယ် ။ ဒီလို မေတ္တာရပ်ခံထားတာဟာ ကျွန်တော့်အနေနဲ့မိဖနှစ်ပါးက ဆိုဆုံးမခဲ့ လို့ ဘဲ ကိုယ့်ထက် အသက်-၂-နှစ်လောက်ကြီးတဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ခုလို တောင်းပန်ရေးသ ...
Posted May 29, 2013, 1:35 PM by lin ker
Uဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ မြန်မာပြည်အတွက်ပဲ ဒီမိုကရေစီပြု ပြင်ပြောင်းလဲရေးရဲ့သင်္ကေတမဟုတ်ဘူး၊ အရှေ့တောင်အာရှဒေသအတွက်ပါ ဒီမိုကရေစီသင်္ကေတ Tuesday, April 2, 2013 အရှေ့တောင်အာရှရေးရာကျွမ်းကျင်သူ မစ္စတာက၀ီချောင်ကစ်ဒါဗွန်နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း(အပိုင်း-၂) ဉာဏ်လင်းမေးမြန်းသည် မစ္စတာက၀ီချောင်ကစ်ဒါဗွန်(Photo: Hnin Ko Oo) MAWKUN: တချို့ ဝေဖန်နေကြတာတစ်ခုရှိတယ်။ မြန်မာ့ဒီမို ကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ အာဆီယံ ထက်ပဲ အနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့ ပိုပြီး နီးနီးကပ်ကပ်ရှိတယ်ဆိုပြီး ဝေဖန်နေကြတာရှိတယ်။ ခင်ဗျားအမြင်က...။ KAVI: အတိုက်အခံခေါင်းဆောင် ဒေါ် ...
Posted Apr 6, 2013, 4:06 AM by lin ker
“စည်းကမ်းပြည့်ဝသောဒီမိုကရေစီ” ကို ဆန့်ကျင်သူ နဲ့ လိုလားသူ ထိပ်တိုက်တွေ့ခြင်း တူမောင်ညို (၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၄ ရက်) မိုးမခ ----------------------------------------------- ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်ဗိုလ်မင်းအောင်လှိုင် ထိပ်တိုက်တွေ့ကြပြီဟုပြောလျှင်ရမည်ထင်သည်။ ယခုထိပ်တိုက်တွေ့မှုသည် အပေါ်ယံသဘောထိပ်တိုက်တွေ့ကြခြင်းမဟုတ်။ အခြေခံ အယူအဆချင်း ထိပ်တိုက်တွေ့ကြသည့် သဘောဖြစ်သည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က “စစ်အစိုးရအဆက်ဆက် ထောက်ခံကာကွယ်ပြောကြားခဲ့သော စည်းကမ်းပြည့်ဝသော ဒီမိုကရေစီ ဆိုသည်ကို တစ်လျှောက်လုံး ဆန်ကျင့်ခဲ့တယ်/ နောင ...
Posted Apr 5, 2013, 8:38 PM by lin ker
ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုရွှေညို ဘာသာပြန်သည်by Khin Maung Nyo (Notes) on Wednesday,3April 2013 at 21:15ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုရွှေညိုဘာသာပြန်သည်ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် စီးပွားရေးတိုးတက်မှုသည်အမြဲတမ်းယှဉ်တွဲမနေတတ်ပေ။ အနည်းဆုံးရွာသူရွာသားများ၊ ဘုန်းတော်ကြီးများ၏ မျက်စိထဲတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ဦးခေါင်းမှ ရောင်စဉ်တွေ မရှိတော့ပေ။ နိုင်ငံရေးသမားအဖြစ် မိမိလုပ်ငန်းက ...
Posted Apr 5, 2013, 2:59 AM by lin ker
ကျားသစ် နားမကြားပါ Minmaha Bagan စာရေးသူကျနော်သည် ကျနော် လေးစားမြတ်နိုးခဲ့ရသော မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အနာဂတ်တွင် မထင်မှတ်ပဲ ကြုံတွေ့ လာဖွယ်ရိ်ှနေသော သူမ၏ ကြမ္မာ အဆုံးဖြတ် အား မိမိ၏ ရိုးရှင်းသော အမြင်ဖြင့် အနုပညာဆန်ဆန် တင်ပြခဲ့ချင်းသာဖြစ်ပါသည်။ တောင်အာဖရိက မှာရှိတဲ့ ကိတ်တောင်းလိုခေါ်ကြတဲ့ ကိတ်မြို့မှာ တယေားထိုးတာအလွန်တော် အလွန်ကောင်းတဲ့ တယောသူမလေး အာဆန်ကေး တယောက်ရ ...
Posted Apr 4, 2013, 6:00 PM by lin ker
လွှတ်တော် နဲ့ အစိုးရဟာ ပြည်ထောင်စု ပြိုကွဲဘို့ လုပ်နေကြသလား။ by Aung Htoo on Monday, 21 January 2013 at 16:10 ·လွတ်မြောက်ရေး လှုပ်ရှားမှုများတွင် လူထုသည် မကုန်ခမ်းန ...
Posted Jan 21, 2013, 5:06 PM by lin ker
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ဦးဆောင်မှုအား ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ဥပဒေစိုးမိုးရေး အခြေခံများမှ ဝေဖန်သုံးသပ်ခြင်း - အပိုင်း (၅) Saturday, January 19, 2013 ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ဦးဆောင်မှုအား ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ဥပဒေစိုးမိုးရေး အခြေခ ...
Posted Jan 19, 2013, 2:24 AM by lin ker
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သို့ ဖဘစာမျက်နှာပေါ်မှ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ။ ထက်ရာဇာ 24 May 2015 at 22:50ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ဒီအချိန်မှာ ရန်သူထက်ကြောက်စရာကောင်းတယ်လို့ပြောခ ...
Posted May 25, 2015, 5:25 AM by lin ker
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သမ္မတဖြစ်ဖို့ ကျော်လွှားရမည့် အတားဆီးများ (၁) ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သမ္မတ ဖြစ်ချင်သည်ဟု ပြောသည်။ ပြောသင့်ပြောထိုက်ပါသည်။ သို့သော် သမ္မတ ဖြစ်ဖို့ ဖြတ ...
Posted Jan 1, 2013, 8:00 AM by lin ker
Showing posts 1 -2of 68. View more »
ခေါင်းဆောင် လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေမှာ ထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ရပ်တည် ချက်နဲ့ လုပ်ဆောင်ချက် တွေအပေါ် အမြင်မကြည်လင်သူ တချို့ က ဝေဖန် ချက်ပေးနေ တာတွေကို ဖတ်ရပါတယ်။ တချို့ကလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ပြည်သူလူထုအကျိုးကို မျက်ကွယ်ပြုပြီး အစိုးရအကြိုက် လိုက်လုပ်ဆောင်နေတယ်လို့တောင် စွပ်စွဲရေးသားနေကြပါတယ်။ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး အပြန်အလှန်ဆွေးနွေး ကြတာတွေကို လိုက်ဖတ်ကြည့်တော့ ဟိုတချိန ...
Posted Dec 16, 2012, 5:45 PM by lin ker
ကျနော်တို့ စကားမကျွံဖို့ပဲလိုတယ် . . ကျနော်တို့စကားနဲ့ အမေစုပြောလာမယ့် စကားတွေ ဆန့်ကျင်ဖက်ဖြစ်မသွားဖို့ပဲလိုတယ် . . by Hawdeka Khalaylay on Thursday, 13 December 2012 at 12:05 ·သေချာတာကတော့ ဦးသိန်းစိန် နဲ့ သူ့ အဖွဲ့က ပြည်ဖျက်သန်းရွှေကို လှန်နေပြီ ဗျ . . . ကြားညပ်နေတာ ဦးသိန်းစိန်မဟုတ် ကာချုပ်မင်းအောင်လှိုင်ပါ . ပြီးခဲ့တဲ့ လ အနည်းငယ်လောက်အထိ ရွှေမန်းက ပြည်ဖျက်သန်းရွှေကို ကလန်ကဆန် လုပ်တဲ့နေရာမှာ နေခဲ့တယ် . . တကယ်လည်း ရွှေမန်းက ပြည်ဖျက်သန်းရွှေကို ကလန်ကဆန်တွေ လုပ်ခဲ့တယ် . . အဲဒီအချိန်က ဦးသိန်းစိန်က မခုတ်တတ်တဲ့ကြောင်လို နေပြခ ...
Posted Dec 13, 2012, 7:06 PM by lin ker
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ မွန်ဝန်ကြီးဗညားဒလအဆင့်ပဲ ရှိတယ် Andrew Soe Ven Ravika .....Kao Non ကို နည်းနည်းဆွေးနွေးချင်တယ်။ လက်ရှိအပြောင်းအလဲဟာ ဒီချုပ်ဖိအားပေးလို့ ပြောင်းလဲလာ တဲ့အခင်းအကျင်း မဟုတ်ဘူး။ ရွှေဝါရောင်ကြောင့် ဖြစ်လာတဲ့ အပြောင်းအလဲ။ ဒီချုပ်နဲ့တိုင်းရင်းသားများဟာ အစိုးရကို ပြုတ်ကျတဲ့အထိ ဘယ်တုန်းကမှ မခြိမ်းခြောက်နိုင်ခဲ့ဘူး။ ဒါကို သူတိုိ့ကိုယ်တိုင် ဝန်ခံရပါလိမ့်မယ်။ သူတို့တကယ်ကြောက်တာက ကျောင်းသား၊ ဘုရားသား၊ စစ်သားတွေပဲ။ ကျောင်းသားတွေမှာ နိုင်ငံရေ ...
Posted Dec 10, 2012, 6:37 PM by lin ker
ရခိုင်အရေး ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည် နှုတ်ဆိတ်နေမှု ရခိုင်အရေး ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည် နှုတ်ဆိတ်နေမှု ကို လန်ဒန် သုတေသီ Aung San Suu Kyi loses her gloss for failing to denounce killings ...............­...............­ ...............­...............­...............­...............­...... Jamilah Begum 05-12-2012 oslo မြန်မာနိုင်ငံ အနောက်ဘက်စွန်း ရခိုင်ပြည်နယ်အတ­ွင်း ဖြစ်ပေါ်နေသောရခိုင် အကြမ်းဖက်သမကရိုဟင်ဂျာလူမျို­းကိုတိုက်ခိုက်မှုမျာ­းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သဘောထား တစ်စုံတစ်ရာ ထုတ်ပြန်ခြင်း မရှိဘဲ၊ ရေငုံနှုတ် ပိတ် နေသည့်အတွက် နိုင်ငံတကာ ဒီမိုကရေစီ ပြယုဂ် လည်း ဖြစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ထူးခြား ထင်ရှားသော အတိုက် အခ ...
Posted Dec 9, 2012, 11:05 AM by lin ker
ကိုယ့်ဟာကိုယ် စဉ်းစားယူနိုင်တဲ့ အလေ့အကျင့်ကောင်းတွေ ဖြစ်ထွန်းလာစေဖို့ James Mint တစ်ချိန်က ဒေါ်စုအကျယ်ချုပ်က လွတ်လာတော့ ထင်သလိုမဖြစ်တဲ့အခါမှာ ကွန်မြူနစ် အကျိုးအပဲ့တွေနဲ့ ကိုပေါတို့၊ မိုးသီးဇွန်တို့အဖွဲ့တွေ စော်ကားနေ ချိန်မှာကတည်းက ဘယ်ဟာက ဘာကြောင့်ဆိုတာ ရေးခဲ့တယ်..... ထုံးစံအတိုင်း ဒေါ်စုကို ချောက်ထဲတွန်းချတာကို ထောက်ခံနေတယ် ၀ါဒမှိုင်းတိုက်နေ တယ် ဆိုတဲ့အပြောတွေ အဆိုတွေနဲ့ ၀ိုင်းပြောခဲ့တယ်...... တစ်ခုစဉ်းစားမိတာက အဲ့ဒိအချိန် အဲ့ဒိလိုဆွေကြီးမျိုးကြ ...
Posted Dec 8, 2012, 5:02 AM by lin ker
အတိမ်းအစောင်းမခံတယ့် မြန်မာ့နိုင်ငံရေး by Ven Ravika on Saturday, 29 September 2012 at 23:13 ·လက်ရှိအခြေအနေမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က တပ် မငြိုငြင်ဖို့၊ သိန်းစိန်အစိုးရ အမြင်ကြည်ဖို့၊ တိုင်းရင်းသားတွေ ယုံကြည်ဖို့ အချိန်အဆမှန်မှန်နဲ့ ကြိုးတန်းပေါ်မှာ လမ်းလျှောက်နေရတယ်လို့ ဆိုရမယ်။ အတိမ်းအစောင်းခံလို့ မဖြစ်ပါ။ ဘွင်ဘွင်ပြောရယင် တပ်က အခုထိ ဣနြေ္ဒရရ ရှိနေပါတယ်။ တပ်က ကာကွယ်ရေး၊ ပြည်ထဲရေး၊ နယ်စပ်ကို ကိုင်ထားပြီး လွှတ်တော်မှာလည်း ၂၅ ရာခိုင်နှုန ...
Posted Sep 30, 2012, 2:34 PM by lin ker
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါဝင် အတိုက်အခံတော်တော်များများစီးပွားရေးနားမလည်နိုင်ဘူး MrMaung KoThetမြန်မာနိုင်ငံ ဘဏ် တခုရဲ့ အကြီးအကဲတယောက်က သုံးသပ်ချက်ကို တုန့်ပြန်လိုပါတယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါဝင် အတိုက်အခံတော်တော်များများဟာ အထိန်းသိမ်းခံဘ၀နဲ့ နှစ်များစွာနေလာတဲ့အတွက် စီးပွားရေးနားမလည်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ အချက်က တော်တော်ရီစရာကောင်းတဲ့ အချက်ဖြစ်နေလို့ပါ…. ကျွှန်တော်ပြောချင်တာ တိုင်းပြည်အတွက် ဦးဆောင်မဲ့ ခေါင်းဆောင်ဟာ အရာရာ ထက်မြက်တဲ့သူ မဖြစ်နိုင်ဘူး…အရေးကြီးဆုံးက တ ...
Posted Sep 25, 2012, 3:19 PM by lin ker
ဒေါ်စု ဆုပေးအပ်ခြင်းခံရတာကို ၀က်လည်ပင်းမှာ ပုလဲပုတီးစွပ်ပေးခြင်းလို့ ဝေဖန်လိုက်တဲ့ ဘင်္ဂလီ Myanmar Online News ဘင်္ဂလားပင်လယ် ရေပိုင်နက်ကိစ္စမှာ မြန်မာတွေ အရေးနိမ့်တော့ နိုင်သွားတဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှအစိုးရကို ချီူးကျူးထောပနာပြုခဲ့တဲ့ Habib Siddiqui ဆိုတဲ့ ဘင်္ဂလီဟာ မြန်မာတမျိုးသားလုံး (အထူးသဖြင့် ရခိုင်လူမျိုး) ကို နှစ်ပေါင်းများစွာ တိုက်ခိုက်စော်ကားနာမည်ဖျက်လာသူ ဖြစ်တယ်။ လူ့အခွင့်အရေးကို ဗန်းပြပြီး ၀ါကာအူဒင်တို့၊ ထွန်းခင်အုပ်စုတို့နဲ့ ပေါင်းပြီး အင်တာနတ်ပေါ် မှာ ဆောင်းပါးများစွာကို ရေးသားကာ ဘင်္ဂလီအရေ ...
Posted Sep 24, 2012, 9:26 AM by lin ker
စတော့ဟုမ်း ဆင်ဒရုမ်း သို့မဟုတ် မမြဝင်းရောဂါ by Hla Mg Han on Wednesday, 19 September 2012 at 20:15 ·တနေ့သ၌ နေပူကြဲကြဲ ချွေးရွှဲရွှဲနှင့် ငရဲပြည်ပမာ ပူလောင်လှစွာသော ရာသီဥတုကြီးအတွင်းပင် ဖြစ်လင့်ကစား အပူငွေ့တွေ တရှိန်ရှိန်ထွက်နေသည့် သတ္တုပုံး အနက်ကြီးတလုံးရှေ့၌ ကျနုပ်သည် ယပ်တောင်ကို တဖျတ်ဖျတ်ခပ်ရင်း ဝဋ်ကြွေး မကင်းသူတယောက်ပမာ ဖေ့ဘွတ်တည်းဟူသော ပြည်သူပိုင် အီလက်ထရောနစ် နို့တစ်ဘုတ်ကြီးပေါ်မှာ ကာလသား၊ ကာလသမီးတို့ အားအားရှိတိုင်း လက်သရမ်းထားကြသော ဟိုစာဒီစာတ ...
Posted Sep 20, 2012, 4:00 PM by lin ker
“ဟုတ်ယောင်ယောင် နိုင်ငံတော်အဆင့်” ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ နိုင်ငံခြားသားဧည့်သည်တွေနဲ့ အတွေ့အပြု များလာတဲ့ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကို ကြည့်ပြီး ပြောချင်တာလေးတွေ အနည်းအကျဉ်း ရှိလာတယ်။ တချိန်တုန်းကများဆို ဒီမိုကရေစီရေးလှုပ်ရှားသူတွေအနေနဲ့ နိုင်ငံခြားသားတယောက်ယောက်နဲ့ စကားပြောဖို့အရေး စစ်အစိုးရလက်ကိုင်တုတ်တွေရဲ့ စောင့်ကြည့်စက်ကွင်း လွတ်မလွတ်ကို ကျီးကြည့်ကြောင်ကြည့် ချက်ကင်လုပ ...
Posted Sep 13, 2012, 2:53 PM by lin ker
ထွန်းအိန္ဒြာဗိုနှင့် ခွန် ဒီးယမ် အမေနဲ့ ထွန်းထွန်းအိမ်မှာဗိုဟ်.... :) (6-4-2013- @ Park Royal)
Posted Apr 7, 2013, 5:51 PM by lin ker
တိုင်းရင်းသားများနှင့်... စည်းလုံးဖို့ဆိုတာ အချင်းချင်း အပြန်အလှန် လေးစားတတ်ဖို့လိုတယ်။ လေးစားဖို့ဆိုတာ သူ့ရိုးရာ ကိုယ့်ရိုးရာဓလေ့တွေ နားလည်အောင် လေ့လာထားကြဖို့ အရေးကြီးတယ်။ (အောင်ဆန်းစုကြည်) Photo - မခင်ဦး — with Thin Thin.
Posted Mar 24, 2013, 7:23 AM by lin ker
Untitled Post Tun Waiခွန် ဒီးယမ်
Posted Mar 24, 2013, 7:22 AM by lin ker
Posted Mar 18, 2013, 5:59 PM by lin ker
The Beauty and the Beast http://goodguy.hubpages.com/hub/Aung-San-Suu-Kyi-The-Beauty-and-the-Beast
Posted Mar 18, 2013, 1:11 PM by lin ker
Showing posts 1 -5of 145. View more »
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ တွေ့ဆုံပွဲများ ကျင်းပရန် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် ပြင်ဆင်နေ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် LA ရောက် မြန်မာပြည်ဖွား မိသားစုများနှင့် တွေ့ဆုံပွဲ ၀င်ကြေးအခမဲ့ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာခြင်း
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် တွေ့ဆုံ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် တွေ့ဆုံဆွေးနွေး
သမ္မတနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တွေ့ 
၀ါရှင်တန်ဒီစီ မြန်မာကွန်မြူနီတီနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တွေ့ဆုံပွဲ ဖိတ်စာထွက်ပြီ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ဆန်ဖရန်စစ္စကို (ဘေးဧရိယာ) မြန်မာမိသားစုများ တွေ့ဆုံပွဲ ကျင်းပမည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း
ဒီမိုကရေစီထွန်းကား တည်တံ့ခိုင်မြဲရန် နိုင်ငံရေးအရ ညှိနှိုင်းဖို့ လိုအပ်ကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောကြား
ကော့သောင်းမှာ NLD အဖွဲ့ဝင်တချို့ ဆန္ဒပြ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အမေရိကန်ခရီးစဉ် မြို့နယ်အသီးသီးက ဖိတ်ကြားလွှာများ ထုတ်ပြန်
ကော့သောင်း NLD ရုံးကို ပါတီဝင်တချို့ ဆန္ဒပြ
အာဆီယံဖိုရမ်ကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တက်မယ်
အာဆီယံ ဆွေးနွေးပွဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တက်မည်
အာဆီယံ ဦးဆောင်သူများ အစည်းအဝေး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မ်ိန့်ခွန်းပြောမည်
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် နေပြည်တော်ရုံးခန်း ဖွင့်ပွဲ (ရုပ်သံ)
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုယ်တိုင် တက်ရောက်တဲ့ NLD ရုံးခန်းသစ် ဖွင့်ပွဲ (ရုပ်သံ)
Posted Aug 25, 2012, 5:32 AM by lin ker
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြည်သူ့လွှတ်တော် အမျိုးသမီးအမတ်များနှင့် တွေ့ဆုံ (ဓာတ်ပုံသတင်း)
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ သူရဦးရွှေမန်း တွေ့ဆုံဆွေးနွေး
သမ္မတနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တတိယအကြိမ်မြောက် တွေ့ဆုံ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် သမ္မတ တတိယအကြိမ် တွေ့ဆုံ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဒက္ခိဏသီရိမြို့နယ် ပြည်သူတွေနဲ့ တွေ့ဆုံ (ဓာတ်ပုံသတင်း)
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဒက္ခိဏသီရိမြို့နယ် ပြည်သူတွေနဲ့ တွေ့ဆုံ (ရုပ်သံ)
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တွေ့ဆုံ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ၃ ကြိမ်မြောက် တွေ့ကြပြီ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ဦးသိန်းစိန် သီးသန့်တွေ့ဆုံ
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ထပ်မံတွေ့ဆုံ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဒက္ခိဏသီရိပြည်သူတွေ အခက်အခဲ မေးမြန်း
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် Pepsi ကုမ္မဏီမှ မစ္စစ်နိုရီနဲ့ တွေ့ဆုံ (ရုပ်သံ)
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဆန်ဖရန်ဘေးဧရိယာ ခရီးစဉ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး မြန်မာတိုင်းရင်းသားမိသားစုများ စုံညီအစည်းအဝေး ကျင်းပရန် ဖိတ်ကြားခြင်း
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရုပ်တုဖွင့်ပွဲနှင့် ရှစ်လေးလုံးအခမ်းအနား မိုးရေးမြို့တွင် ကျင်းပ
Posted Aug 25, 2012, 5:17 AM by lin ker
တက္ကသိုလ်ပညာရေးဥပဒေ လွတ်လပ်မှု အားနည်းဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ထောက်ပြ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကမ္ဘာ့ဘဏ် ဒု-ဥက္ကဌနှင့် တွေ့ဆုံ (ရုပ်သံ)
မင်္ဂလာပါ ဒီမိုကရေစီနဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း သီချင်း
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အမေရိကန်ခရီးစဉ် အနောက်ခြမ်း မြို့တော်များပါဝင်ဟု ဆို
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဂျပန်ပြည်ကို ချယ်ရီပွင့်ချိန် သွားမည်
ဒီချုပ် ဥက္ကဌ ကုသိုလ်ဒါနပြုလုပ်တဲ့ ရဟန်းခံအလှူတော်မင်္ဂလာပွဲ (ဓာတ်ပုံသတင်း)
မိခင်နှင့် ဖခင်ဖြစ်သူအတွက် ရည်စူးပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရဟန်းခံရှင်ပြုအလှူ ကျင်းပ (ရုပ်သံ)
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရဟန်းအစ်မအဖြစ် ကုသိုလ်ဒါနပြု
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ကြိုဆိုရေး ဖို့ဒ်ဝိန်းမိသားစု ပြင်ဆင်
နေပြည်တော်က မဲဆန္ဒရှင်တွေနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တွေ့ဆုံ
အလုပ်လက်မဲ့အခြေအနေ ဆိုးရွားနေကြောင်း တောင်သူတွေ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို တင်ပြ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ နှလုံးသားနဲ့ ခံစားမှုကို တူးဆွမယ့် ရုပ်ရှင် (အင်တာဗျူး)
Posted Aug 7, 2012, 6:34 PM by lin ker
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သို့ ဖဘစာမျက်နှာပေါ်မှ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ။ ထက်ရာဇာ 24 May 2015 at 22:50ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ဒီအချိန်မှာ ရန်သူထက်ကြောက်စရာကောင်းတယ်လို့ပြောချင်တယ်။သူ့ကိုယုံထားတဲ့သူမှန်သမျှကို စစ်အစိုးရကို ယုံရမယ်လို့ပြောတာနဲ့အတူတူပဲ။သန်း၆၀ကျော်ဟဟာ စစ်အစိုးရကိုမုန်းနေတယ် ခင်ဗျားကို ချစ်နေတုန်းပဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်။ခင်ဗျားကိုချစ်တဲ့ သန်း၆၀ကျော်ကို ခင်ဗျား စစ်ဖိနပ်အောက်ကို မ၀င်ခိုင်းပါနဲ့။ကျနော်မဆဲဘူးလို့တယောက်သောသူကိုကတိပေးထားလို့။ခင ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သမ္မတဖြစ်ဖို့ ကျော်လွှားရမည့် အတားဆီးများ (၁) ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သမ္မတ ဖြစ်ချင်သည်ဟု ပြောသည်။ ပြောသင့်ပြောထိုက်ပါသည်။ သို့သော် သမ္မတ ဖြစ်ဖို့ ဖြတ်ကျော်ရမည့် အတားအဆီးကြီးများ ရှိနေတာကို သတိပြုရပါမည်။ မော်စီတုန်းကတော့“နိုင်ငံရေးအာဏာဟာ သေနတ်ပြောင်းဝက ထွက်တယ်” လို့ ပြောခဲ့သည်။ တရုတ်ပြည်ရဲ့ ထူးခြား ချက်အရ ဒီလိုပဲပြောရမည်။ တရုတ်ပြည်မှာက ပြည်တွင်းစစ် သည်းကြီးမဲကြီးဖြစ်နေသည်။ ဘယ်တုန်းကမှ ရွေးကောက် ခံအစိုးရမရှိခဲ့။ ပြည်တွင်းစစ်ကို ရာစုနှစ်နဲ့ချီပြီး တ ...
NLD မှာ အရူးတွေရောက်နေပြီလား by သက္က မိုးညို on Sunday, 30 December 2012 at 23:53 · (မှတ်ချက်က စဖေါ်ပြရပါမည်။ ဆရာဝန်တစ်ဦး အနေဖြင့် စိတ်ကျန်းမာရေး ချို့တဲ့သူတစ်ဦးကို “အရူး” ဟု ကြမ်းတမ်းစွာ မခေါ်ရပါ။ သို့သော် ယခုစာသည် ဆရာဝန်တစ်ဦးအနေနှင့် မဟုတ်ပဲ စိတ်ကြမ်းမာန်ကို မလျော့နိုင်လေသူ ပြည်သားတစ်ဦးအနေနှင့် ရေးပါသဖြင့် အရူးဟုပင် သုံးနှုန်းပါသည်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး တိုက်ခိုက်လိုခြင်း အလျှင်းမရှိပါ။ ထို့အတူ သူတပါးအားလည်း အသရေ မဖျက်လိုပါ။ မတရားအပုပ ...
Posted Dec 31, 2012, 8:10 PM by lin ker
နိုင်ငံခေါင်းဆောင်ကြီး တစ်ဦးရဲ့ သမီးအနေနဲ့ ဘာဖြစ်လို့ မိုက်ကယ်အဲရစ်နဲ့ လက်ထပ်တာလဲ by တို့ဗမာ Dobama on Saturday, 29 December 2012 at 13:03 · နိုင်ငံခေါင်းဆောင်ကြီး တစ်ဦးရဲ့ သမီးအနေနဲ့ ဘာဖြစ်လို့ မိုက်ကယ်အဲရစ်နဲ့ လက်ထပ်တာလဲဆိုရင် အဓိကအကြောင်းအရင်းက ပြည်ပမှာ ဘာ့ကြောင့် ရှိနေတဲ့အကြောင်းအရင်းကို အရင်ထုတ်ရှင်းရပါမယ်.။ အမေစု မိခင် ဒေါ်ခင်ကြည်ဟာ ၁၉၆၀ မှာ အိန္ဒိယသံအမတ်ကြီးအဖြစ် ခန့်အပ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒီတော့ အိန္ဒိယကို ပြောင်းရပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ အမေစု အသက်ဆယ့်ငါးနှစ်ရှိပါပြီ။ ဆယ်ခုနှစ်နှစ်အရ ...
Posted Dec 31, 2012, 6:41 PM by lin ker
Showing posts 1 -4of 68. View more »